April Nintendo Direct recap | Akụkọ akụrụngwa
Mmelite ikpeazụ nke akụkọ nintenderas fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nwere nnukwu aha nke Nnukwu N nke ahụ gbasaa katalọgụ nke laptọọpụ ọhụrụ ya, Nintendo 3DSọ bụ ezie na Wii U o jikwa nkeji ole na ole raara onwe ya nye.
Site Mundi Videogames Anyị na-ewetara gị oge a na nchịkọta a ebe ị ga-ahụ trailers nke egwuregwu ndị a gosipụtara na ozi ọma nke ụlọ ọrụ Tokyo kwupụtara maka njikwa ya abụọ dị ugbu a.
Ndị otu MarioS 3DS
Omuma kemgbe oge nke Nintendo 64, enweghị ike ịhapụ nhọpụta ya na njikwa nke nintendera na ọrụ. Ọ ga-agụnye mbadamba 7, ihe ruru minigames 81, ga-enye egwuregwu dị egwu nke saga ma rute n'ụlọ ahịa n'oge oyi.
Agwaetiti Yoshi 3
Nkeji nkeji atọ nke aha a na-agụ dinosaur na-acha akwụkwọ ndụ Nintendo, Yoshi, na nwa Mario. Enwetabeghị ọtụtụ nkọwa ma ọ bụ ụbọchị ntọhapụ, mana site na vidiyo anyị nwere ike ịmaworị na ọ ga-eme ka njirimara saga ahụ ghara ịdị ma ọ ga-enye ngalaba nkọwa pụrụ iche.
Akụkọ banyere Zelda: Njikọ nke 2 gara aga
The egwuregwu a na-mepụtara dabere na ụwa nke na akụkọ ifo katrij nke SNES nke weputara na 1992. Egwuregwu ahụ ga-erite uru nke 3D nke Nintendo 3DS ọ ga-ekwe ka Njikọ gbanwee ghọọ eserese ma gaa n'etiti mgbidi na mgbidi. Obi abụọ adịghị ya, oge a na-apụghị izere ezere maka ndị nwe njikwa ahụ n'afọ a.
Donkey Kong Mba laghachi 3D
Obere obere ihe a Wii ga-abata na ọkwa ọhụrụ na ụdịdị dị iche iche ga - eji ọrụ nke Nintendo 3DS. A na-atụ anya ịhapụ ya na Mee 24.
N’agwaetiti dị omimi Mario ga-agagharị n'etiti ụwa n'ezie na ụwa nrọ ahụ, na-agafe n'uche nwanne ya nwoke, ịchọta, maka oge iri atọ na anọ, Achịcha piich. Na-atụ anya ya maka July 12.
Mario na Donkey Kong: Minis na-aga
Ọ ga-abata naanị na eShop ma maa ndị egwuregwu aka mgba iji duzie obere mkpụrụedemede taịl nile nke ha ga-edobe na ihuenyo mmetụ ka ha wee nwee ike iru ihe mgbaru ọsọ ahụ na elu elu ahụ, jiri ọtụtụ ihe karịrị 180 ọkwa na ụzọ anọ. Ọ ga-adị na Mee 9.
Mario Golf: njem ụwa
Ọ ga-abata n'oge ọkọchị ma nyekwa usoro egwuregwu a ga - agba ọsọ, na - abawanye ohere ọ ga - enwe na ịntanetị na asọmpi megide ndị na - asọ mpi n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Akụkọ banyere Zelda: Oracle of Ages and Oracle of Seasons
Na Mee 30, egwuregwu abụọ a ga-abata na eShop, nke e kenyere na mbụ Capcom maka añeja Egwuregwu nwa agba 12 afọ gara aga. Mkparịta ụka anyị na-eme n'otu egwuregwu nwere ike imetụta onye ọzọ, na-emeghe, dịka ọmụmaatụ, ime ụlọ zoro ezo.
Obi Ike Nkọwa: Na-efe Efe
O nweghi ụbọchị ewepụtara ya, mana ọ ka njọ ịmara na RPG a nọ na-eche ogologo oge ga-akụ kọntinent ochie na 2013. Naa na-enye okwute.
Prọfesọ Layton na Azran Legacy
Layton ọ na-atụ uche ọ bụla ma laghachi, ọzọ, ya na mgbagwoju anya ya na enigmas iji maa ndị ọrụ nke Nintendo 3DS, ọ bụ ezie na maka ugbu a, ọ nweghị ụbọchị ntọhapụ.
Shin Megami Tensei nke Anọ
Nanị RPG a ga - abịa 3DS ya na arụmọrụ zuru oke nke na-eji ihe njikwa Nintendo na ọ bụ ihe ọzọ siri ike nkwa na genre na ihe dị mkpa mgbakwunye na katalọgụ nke igwe.
Dị ka m na-atụ anya gị, Wii U O nwekwara oge nke ebube ya, ọ bụ ezie na ha abụghị ọkwa dị egwu dị ka ị pụrụ ịhụ.
Egwuregwu ahụ ga-emesị rute mebere console onye Europe Wii U ma ọ dị nwute, ọ nweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ enyere banyere ya.
Ọhụrụ Super Luigi U
Ma ọ bụ karịa ma ọ bụ ihe na-erughị a dlc maka Ọhụrụ Super Mario Bros nke ahụ na-agbakwunye ọkwa 82 na ohere nke igwu egwu nwanne Nintendo, Luigi, nwere ikike ka elu ịwụli ọ bụ ezie na ijiri ike jisie ike karịa Mario. Nbudata a ga-abata n'oge ọkọchị.
Ihe kachasị dị ịrịba ama bụ nnabata nke Pikmin na-efe elu, nwere ike ibufe ihe site na ikuku. E gosipụtabeghị ụbọchị ọpụpụ ya maka Europe, mana ọ ga-abata na Japan na July 13 na US na August 4, n'ihi ya, ọ gaghị ewe ogologo oge iru anyị maka ụbọchị ruru.
Ma nke a bụ ya. Nintendo 3DS gbasaa katalọgụ ya na egwuregwu dị arọ, na-eme ka ọ bụrụ laptọọpụ juic na ahịa, ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ Nintendo na-ejide usoro ngwanrọ na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu, nke nwere ike ịbụ mma agha ihu abụọ. Dị ka Wii U, obere ọkwa maka njikwa nke chọrọ oxygen ngwa ngwa n'ụdị egwuregwu: ga- E3 oge anyị na-eche? Ọ bụrụ na ịcheghị ngosi ahụ, anyị na-ahapụrụ gị ya ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya n'ozuzu ya:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Eprel Nintendo Direct recap